အောက်တိုဘာလ 2014 - စာမျက်နှာ5- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2014 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 5)
လစဉ်မော်ကွန်း: အောက်တိုဘာလ 2014
Abbey လမ်းမကြီးမှာ "က Galaxy ၏ Guardians" နဲ့ Music ရဲ့တိမောသေ Williams ကရမှတ်နဲ့ Big မြည်
Nashville-တိမောသေ Williams က, Nashville-based ကွှေးမွညျတမျး, Music, box ကိုရုံးခခြှေဲက Galaxy ၏ Guardians များအတွက်ကြိုးကိုင်နှင့်ကောက်ယူတေးရေးဆရာ Tyler ဘိတ် '' ရမှတ်များအတွက်တေးရေးဆရာ။ ရုပ်ရှင်, တီဗီ, ကြော်ငြာနှင့်အခြားမီဒီယာ၌သူ၏အလုပ်အတွက်မြောက်မြားစွာဆုရရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့သူဝီလျံ, လန်ဒန်မြို့ Abbey လမ်းများစတူဒီယိုမှာစတူဒီယိုတစ်ခုမှာတစ်ခြောက်လုံးနေ့ session ကိုတစ်ဦး 95-piece အသံစုံတီးဝိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဝီလျံကိုလည်းကောက်ယူ ...
ပစိဖိတ်ရုပ်မြင်သံကြား Center က Los Angeles မြို့မြို့တော်ဝန်အဲရစ် Garcetti နှင့် Councilmember ရှင်ပေါလု Koretz ကြိုဆို
Los Angeles, အောကျတိုဘာ 20, 2014 - ပစိဖိတ်ရုပ်မြင်သံကြားစင်တာ (PacTV), တစ်ဦး Los Angeles မြို့အခြေစိုက်လွတ်လပ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂီယာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီမကြာသေးမီကကုမ္ပဏီ၏မော်တော်ရိပ်သာလမ်းဌာနချုပ်မှာ Los Angeles မြို့မြို့တော်ဝန်အဲရစ် Garcetti နှင့် Councilmember ရှင်ပေါလု Koretz ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်သည် 5th ကောင်စီခရိုင်အတွင်းရှိစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, CD5 ခရီးစဉ်အတွက်ကွန်မြူနတီနေ့၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ခဲ့သည် ...
Simian 3.0 မျက်မှောက်ရေးရာနှင့်ပိုမိုအစွမ်းထက်, မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုမြန်ဆန်ကို
ပိုပြီးမျက်မှောက်ရေးရာ user interface ကို,်Reel Builder, တိုးတက်လာသော analytics, ရှာဖွေ်ဆိုက်နှင့် Simian 3.0 ရရှိနိုင်အရှိဆုံးပြည့်စုံ, အလွယ်ကူဆုံး-to-အသုံးပြုမှုကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းစေ။ ဒါကြောင့်ကြွလာသောအခါ Laguna Niguel, Calif. -Simian, ဖန်တီးမှုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, ယနေ့, အဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်အဖြစ်က၎င်း၏အမွေမှုတွေကိုဖြစ်စေကြောင်းယင်း၏အုတ်မြစ်မီဒီယာ-sharing ပလက်ဖောင်းတစ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုများလွှတ်ပေးရန်ကိုကြေညာ ...
တစ်ဦးကဘုံ Thread ရဲ့ရွှံ့စေး Staub က Universal ရဲ့ဟယ်လိုထိတ်လန့ Nights အဘို့ဖုတ်ကောင်ကျူးကျော်ညွှန်ကြား
ဖုတ်ကောင်တစ်ဦးအလုံးအရင်းတစ် jetway တံခါးကိုထဲကသွားရမည်သည့်အခါဆိုက်ရောက်ဗီဇာခုနှစ်တွင် Los ANGELES- တစ်ဦးလေဆိပ် Terminal ကိုအတွက်ခရီးသွားများအတွက်ထိတ်လန့်ကြသည်။ အဆိုပါမှာတော့ဖုတ်ကောင်နှိပ်စက်နှင့်သူတို့က Universal ၎င်းတို့၏လမ်းပေါ်မြန်မြန်အဖြစ်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်အခြားခရီးသွားများနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းအော်ဟစ်လောင်ကြပြီ။ "ကျနော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ပွဲချင်းပြီးအဖြစ်ကြောက်စရာပါစေနှင့်လူအဘယ်အရာကိုတစ်အရသာပေးချင်ခဲ့တယ် ...
မြှားမီဒီယာငျြအမွ "Ultimate လေဆိပ်ဒူဘိုင်း" ၏ဆန်းသစ်သောထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းနေ့စဉ်ရွှေ့ပေးရန် Aframe အသုံးပြု
Aframe ရဲ့တိမ်တိုက်ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ, ဇာတ်လမ်းတွဲ Per အကြောင်းနှစ်ပတ်အတွင်း, တည်းဖြတ်တွင် 20 ရက်သတ္တပတ်ကယ်တင်တော်မူ၏; စီးရီးဘတ်ဂျက်အောက်တွင်အချိန်တွင်ကယ်တင်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်တစ်ဦးက သာ. ကောင်း၏ Show ကိုဘော့စတွန်နှင့်လန်ဒန်အောက်တိုဘာလ 20 ခုနှစ်တွင်ရလဒ်များ, 2014 - Arrow မီဒီယာ, ဗြိတိန်ထိပ်တန်းလွတ်လပ်သောဖန်တီးမှုအင်အားစုတွေတလိုက်ဖို့စီးရီးများ၏ထုတ်လုပ်မှုသည်၎င်း၏သည်မိုဃ်းတိမ်ကိုဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းအဖြစ် Aframe ကိုအသုံးပြုထားသည်။ ..
PrimeTime အလင်း Way ကိုထွန်း
က PrimeTime Lighting ထုတ်ကုန်အမြဲဖြစ်မထားပါဘူးကြောင့်အေးမြစွမ်းအင်ချွေတာ, image ကိုတိုးမြှင့်စတူဒီယို, ဗွီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး LED နှင့်ချောင်းအလင်းရောင်တူရိယာတစ်ခုပြည့်စုံအစုစုသည်နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်စတူဒီယိုအလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာများခွဲခြားဆက်ဆံမှု၏တောင်းဆိုချက်များ, တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီစစ်မှန်တဲ့င်နေစဉ် အမှု။ သငျသညျစိတ်ကူးနိုင်သကဲ့သို့, အလင်းရောင်ဘဝကိုယ်နှိုက်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သမိုင်းအတွက် fixed ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ...
HBO OTT ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်၎င်း၏အနာဂတ်ထိန်းချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်
တစ်ခုချင်းစီကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသမိုင်း၏သင်တန်းကျော်သာအများအပြား Big Bang အချိန်လေးရှိပါတယ်။ အဓိကဖြစ်ရပ်ဘာမျှအစဉ်အဆက်ကိုထပ်တူညီပါလိမ့်မည်သည့်ပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်သည့်အခါခဏ။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုထဲမှာအကြှနျုပျတို့ကို Google အွန်လိုင်းဗီဒီယို၏ဂတိအတွက် $ 2002 ဘီလျံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, 1.65 တွင် YouTube ကိုဝယ်ယူသောအခါကဲ့သို့ကြီးမားသောပေါက်ကွဲသံကြီးယခုအချိန်တွင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်သည့်အခါ ထိုအချိန်မှစ. အဘယ်အရာကိုလို ...
ကို Creative ပညာရှင်များများအတွက်ပထမဦးဆုံးမိုဘိုင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာဆာဗာကိုကြေညာခြင်း: အဆိုပါ ProMAX ပလက်ဖောင်းအိတ်ဆောင်
အိတ်ဆောင်ဆာဗာ Groundbreaking မိုဘိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တိုးတက်လာခြင်းနှင့်တွင်-သတ်မှတ်မည် Workflows (စက်တင်ဘာလ 12th, 2014; အမ်စတာဒမ်, NL) အသစ်များကိုဖွအဆိုပါ IBC Show ကိုကြမ်းပြင် မှစ. ယနေ့ ProMAX စနစ်များ, ပလက်ဖောင်း modular လုပ်ငန်းအသွားအလာဆာဗာထုတ်လုပ်သူ, စက်ကိုတည်းဖြတ် high-performance ကို ONE နှင့် Cache- အဆိုပါပလက်ဖောင်းအိတ်ဆောင်: တစ်ဦးက archive ကရိယာ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်အသစ်ကြေညာခဲ့သည်။ ဤသည်တော်လှန်ရေးသမားခရီးဆောင်ဆာဗာကလုံးဝထုတ်ကုန်အသစ်တည်ထောင်ရန်သတ်မှတ် ...
ProMAX မိတ်ဆက်နယူးစီးရီး4ပလက်ဖောင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာ Server များ
မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Browser ကို-အခြေပြု UI ကိုထိပ်ဆုံးအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအစွမ်းထက် features တွေများစာရင်းကို။ စွမ်းဆောင်ရည် & စွမ်းရည်အတွက်အကြီးစားတိုး 4K ဗီဒီယိုစစ်မှန်တဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်မှုကို enable ။ (စက်တင်ဘာလ 11th, 2014; Santa Ana,, CA) ProMAX စနစ်များ, ပလက်ဖောင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာဆာဗာထုတ်လုပ်သူ, high-performance ကို ONE စက်နှင့်ကက်ရှ်-တစ်ဦးက archive ကရိယာ, အ ProMAX ဖြန့်ချိထားပါတယ် ...
ကို ABS နောက်ဆုံးရေးသားချိန် Lighting Package ကို, ဗီဒီယိုအမှတ်တရအတူ KGW သတင်းများစတူဒီယိုလန်းဆန်း
SEATAC, WA - Professional ကဗွီဒီယိုနဲ့အသံစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအဆင့်မြင့်အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်း (ကို ABS) KGW, Portland, Ore ်ထမ်းဆောင်ယင်းအား NBC Affiliate ၏အဓိကသတင်းစတူဒီယိုအသစ်တစ်ခုအလင်းရောင်အထုပ်ကို install ထားပြီး (DMA #23) နှင့်သစ်တစ်ခုကိုးပေးခဲ့သည်။ အစိတ်အပိုင်းအစုံ update လုပ်ဖို့ -panel ဗီဒီယိုကမြို့ရိုးကိုစနစ်။ အဆိုပါ Gannett ပိုင်ဘူတာရုံသြဂုတ်လ 30 အပေါ်သစ်ကိုအလင်းရောင်နှင့်အတူနထေိုငျသှားကွ ...
Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (SMPTE) IBC2014 အသုတ်စုံ၏ Society က
IBC2014 စဉ်အတွင်း IBC2014 SMPTE နည်းပညာဆိုင်ရာ Sessions နှင့် IBC2014 ထံမှပြပွဲများကနေ SMPTE သတင်း, 50 SMPTE အဖွဲ့ဝင်များကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းပီ ရှိ. , 107 SMPTE ထက်ပိုမိုအဖွဲ့ဝင်တည်တံ့ခိုင်မြဲထက်ပိုထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများပြ။ အဆိုပါ IBC မိတ်ဖက်ကျေးရွာအတွင်းရပ်တည်မှုတွင်အခြေစိုက်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပါဝင်မှုထိုကဲ့သို့သောပေးသောလူကြိုက်များ Rising Stars အစီအစဉ်အဖြစ်အစပျိုးများအတွက်ထောက်ခံမှုပါဝင်သည် ...
TMC သည်ဒီဇိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်သဟဇာတဗီဒီယို Delivery အခြေခံအဆောက်အအုံများ DigitalGlue မိတ်ဆက် Upgrade
။ အောက်တိုဘာ 16, 2014 - - ခုနစ်-တစ်နှစ်တာမိတ်ဖက် Key ကိုကာကွယ်ရေးလိုင်း Laguna NIGUEL, ကာလီဖိုးနီးယားများအတွက် Encoding, ဒီကုဒ်ဒါနှင့် Multiplexing စနစ်များ Refresh လိမ့်မည်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်စီမံကိန်း DigitalGlue ယနေ့ကရှည်အချိန် client ကို TMC သည်အခြားအကြီးစားစီမံကိန်းကိုစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကြေညာခဲ့သည် ဒီဇိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း State-Of-The-Art နည်းပညာအစိုးရမှဖြေရှင်းနည်းများ, စစ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဖောက်သည်တစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူ။ DigitalGlue မှ TMC သည်ဒီဇိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည် ...
Wohler အမည်များကုမ္ပဏီ၏ RadiantGrid စီးပွားရေးလိုင်းများအတွက်အင်ဂျင်နီယာဒါယန်းကို Sivalingam ဒါရိုက်တာ
San Francisco - အောက်တိုဘာ 16, 2014 - Wohler Technologies ကယနေ့ဒါယန်းကို Sivalingam အဆိုပါ RadiantGrid (TM) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်းများအတွက်အင်ဂျင်နီယာများ၏ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းထားပြီးကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဒီအခန်းကဏ္ဍသစ်အတွက်, Sivalingam နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ၏ဖိုင်-based မဟာဗျူဟာမွမ်းမံခြင်းနှင့် execute မှထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ရောင်းချမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်, Wohler ရဲ့ဖိုင်ကို-based ဖြေရှင်းချက်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာများအတွက်တာဝန်ရှိပါလိမ့်မည် ...
ဟောလိဝုဒ် Center ကစတူဒီယိုစီမံကိန်းများကိုအဆောက်အအုံ Boom ဒါဟာအဆိုတော်မိသားစု၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ 30 နှစ်များအားအမှန်ခြစ်အဖြစ်
မှတ်တိုင်ထုတ်လုပ်မှုတွေအများကြီးရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ဗဟိုအဖြစ်ပြန်လည်အခန်းကဏ္ဍအတွက်ဆိုရမှာပါ။ ဟောလိဝုဒ်-ဟောလိဝုဒ် Center ကစတူဒီယိုတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအကြီးဆုံးလွတ်လပ်သောထုတ်လုပ်မှုစာရေးတဦးသည်ဧရိယာရဲ့လန်းလာသောရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအသိုင်းအဝိုင်းအစေခံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ 106,000 စတုရန်းပေရုံးရှုပ်ထွေးတည်ဆောက်ရန်အစီအစဉ်များကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အသစ်တခုကားပါကင်တည်ဆောက်ပုံတို့ပါဝင်သည်နှင့်အခြားမည်သည့်အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက် ...
Tradefair NATEXPO ဖို့ဗြိတိန်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာ၏အကောင်းဆုံးကြာ
မော်စကိုပြပွဲ Tradefair, ထိုပင်လယ်ရပ်ခြားပြပွဲအထူးကုမှာဗြိတိန်တဲအတွက်ခြောက်လုံးကုမ္ပဏီများ, techUK, NATEXPO, ရုရှား၏အကြီးဆုံးထုတ်လွှင့်နည်းပညာပြပွဲမှာ Great Britain တဲကိုယ်စားတစ်ကြိမ်ထက်ပိုမန်နေဂျင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ခြောက်လကုမ္ပဏီများသည်အများအပြားဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံရရှိအတူ Tradefair အဖှဲ့အစညျးရဲ့အားသာချက်ကိုယူပြီးနေကြသည်။ 100 ကျော်ဦးဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများ ...
Demo 4Kase, SMPTE မှာအိတ်ဆောင်, တွင်-သတ်မှတ်မည်နေ့စဉ် System ကိုမှဗီဒီယိုစနစ်များအကျိုးဖြစ်ထွန်း
Mac အတွက်-based system ကိုမိုဘိုင်းအထုပ်ထဲမှာအယ်ဒီတာ့အာဘော်နှင့်ပိုပြီးနေ့စဉ်သတင်းစာများအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ ရိုးဗီဒီယို, Booth 409 မှာကြည့်ရှုပါ။ BURBANK-အားသာချက်ဗီဒီယိုစနစ်များဟောလိဝုဒ်, On-သတ်မှတ် SMPTE4နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲမှာအသုံးပြုမှုအတွက်အောက်တိုဘာလ 2014-20 23Kase ၎င်း၏အသစ်ကမိုဘိုင်း, Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တည်းဖြတ်မှုစနစ်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ On-set ကိုအများဆုံးကျစ်လစ်သိပ်သည်းဆုံးနှင့်ပြည့်စုံခြင်း, အပေါ့ပါးဆုံး ...
5 ၏စာမျက်နှာ 10«ပထမဦးစွာ...«34567	»	...နောက်ဆုံး»
Davinci Resolve အွန်လိုင်းအယ်ဒီတာ
ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာ - စားသုံးသူအသံ / ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်အမျိုးအစား
Assistant Packaging Designer - ၀ င်ခွင့်အဆင့်
အလင်းရောင်ဒီဇိုင်း Intern - မတ်လ 2020 မှစတင်သည်